> 2 Naghachi data si dị iche iche na kaadị ebe nchekwa ụdị
Olee otú faịlụ na-ehichapụ si SD kaadị?
E nwere ọtụtụ ihe n'azụ doro ajụjụ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọtụtụ ndị ikpe nke faịlụ nhichapụ bụ n'ihi na eziokwu na ndị ahịa bụghị ẹka ezuru nchebe ma ọ bụ mere ka n'aka na igodo bụ enwe na-akpaghasị n'ụzọ nke mere na nke etịbe. Iji jide n'aka na ihe kasị mma mkpebi na-nyere ka onye ọrụ na nke a ọ na-akpa gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ga-aga n'ihi ndị na-akpata nke faịlụ nhichapụ dị ka ọ bụla na-akpata nwere iche iche mkpebi na bụ na-emejuputa atumatu-eme ka n'aka na ihe kasị mma e nyere na nke a na okwu nke data mgbake na mweghachi.
m. Human njehie
Ọ bụ mbụ nke na-akpata nhichapụ nke data. Na ịpị Mgbanwe + Del isi enweghị ihe ọ bụla ndabere na-eduga ná a nke na onye ọrụ n'ikpeazụ enwe a otutu na nke a. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị inwe a ọkaibe mgbake ngwá ọrụ iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu nagideworo ka anya dị ka ọ na-eme. The SANS Institute ka weere ya dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mbipụta niile ugboro na n'iyi ka usoro a oké ịgbatị na-emekwa ọtụtụ losses ka arụmọrụ kwa ụbọchị nke azụmahịa nke-eme dị ka a N'ihi nke a elezighị omume.
ii. Mechanical kpatara
The nke na kaadị na-akpata ya na-malfunction na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na-ata ahụhụ merụsịrị na nke a. Mgbe ọ na-abịa n'ibu kpatara mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na emeputa bụ onye a ga-ata ụta ka ule nke kaadị na-adịghị DOE tupu ahịa igba egbe na Ya mere dum ogbe nke kaadị ekesa ga-egosi otu nke.
Na-ehichapụ faịlụ recoverable?
Mbụ ebe Mgbe faịlụ nhichapụ bụ egweri biini na site na iji omenala usoro ngwaọrụ faịlụ nwere ike natara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na faịlụ zipụrụ ozi ozugbo ka egweri biini adịghị anọgide na mbụ ha ebe na maka otu ihe ahụ ha na-anakọtara ka a nkịtị ọnọdụ na-eme ka usoro nke nhichapụ mfe. Ozugbo faịlụ a ehichapụ si egweri biini processor n'ezie na-eme ka n'aka na akwụkwọ nke faịlụ a na-ehichapụ ya ma maka otu ihe ahụ ha na-adịghị anya ka onye ọrụ na-enweghị na ojiji nke elu ngwaọrụ na ike-emejuputa atumatu iji jide n'aka na na ihe kasị mma na ọkaibe results na-enwetara na faịlụ na e ehichapụ si egweri biini na-weghachiri eweghachi. Ndị a faịlụ bụ maa recoverable na nke a rue data bụghị dekwasịzie nke na layman asụsụ pụtara na a omume ọhụrụ na-adịghị arụnyere. Ọ bụrụ na a ikpe na-eme mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị-enwe ike agbake data na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu na-arụzi ụgbọala na-eji nke ga-maa-eri na ọtụtụ dollar ọtụtụ puku dollar. Ihe ọ bụla ikpe faịlụ na-maa recoverable.
Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site SD kaadị ọsọ ọsọ na n'enweghị?
Wondershare Data Recovery Bụ ihe kasị mma na ndị kasị elu omume na a pụrụ iji jide n'aka na data e weghachiri eweghachi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na mmepe nke usoro ihe omume mere n'aka na onu nke mfe ẹnịm na ọ na-etinyere na-eme nke a usoro. Ọ bụ ya mere kasị mma na ndị ọkaibe usoro na onye ọrụ kwesịrị iji na-eme ka n'aka na data na-gbakee. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị inwe kacha mma n'ihi mgbe yiri usoro na na akụkụ ikpeazụ nke a nkuzi na-etinyere na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi screenshots agbakwunyere nke ga-aka ha na-ndị kasị mma n'ihi na ha kọmputa ma ọ bụ na ngwaọrụ na-achọ a data mweghachi. Iji nweta kasị mma na ndị ọkaibe utịp ọ na-gwara ịchọ enyemaka si online Wondershare Data Recovery forums ebe ọkachamara bụ mgbe niile online na-eduzi ọrụ.
Akwado ụdị faịlụ nke a usoro
Faịlụ ndepụta bụ dị ka ndị na-enye ohere onye ọrụ na nke kacha mma n'ihi:
Akwado ọnọdụ nke a usoro
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị na-akwado site na a usoro na data ọnwụ ruru ka ọ bụla nke ndị a kpọrọ aha n'okpuru nwere ike weghachiri eweghachi na ala:
Formatting nke media
Mberede faịlụ ọnwụ.
Iji Wondershare Data Recovery
Na-esonụ bụ usoro na a ga-soro na nke a:
1. The URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html bụ ka a bịa na ka e usoro arụnyere na ulo oru:
2. Ke nzọụkwụ nke abụọ na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ụdị nke faịlụ na-ahọrọ na a ga-eweghachi:
3. The ọnọdụ nke faịlụ a ga-kpọmkwem mgbe ahụ:
4. The weghachiri eweghachi faịlụ ndị mgbe ahụ ka-natara dị ka kwa ọchịchọ:
Olee otú iji gbochie SD kaadị data ọnwụ
Na-esonụ bụ ụfọdụ Atụmatụ nke pụrụ inyere onye ọrụ iji gbochie SD kaadị data ọnwụ:
1. The batrị nke ngwaọrụ ndị na-n'ụzọ zuru ezu ebubo n'ihu data transfer nke ụdị ọ bụla bụ ka a.
2. Ọ bụrụ na faịlụ na nchekwa nke kaadị na-emeghe jidesie usoro ọ bụ mgbe a ga-e si na kaadị agụ.
3. File ije n'ime kaadị ekwesịghị ime ma ọ bụrụ na ọdịnaya na-emeghe jidesie usoro dị ka ọ na-emerụ kaadị merụsịrị eme bụ irrecoverable mgbe ụfọdụ.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site sd kaadị ọsọ ọsọ na n'enweghị